7 App -ka Ugu Fiican Kabaha Bilaashka ah 2021 | Hel Sneaker Bilaash ah
Bogga ugu weyn 7 App -ka Ugu Fiican Kabaha Bilaashka ah 2021 | Hel Sneaker Bilaash ah
Waxaad jeceshahay dareenka dejiska leh ee ka imanaya xirashada labadan kabood ee isboortiga laakiin si uun; lacagtii ayaa kaa dhammaatay si aad u beddesho kuwa duugoobay ee aad haysato. Ma ogtahay inay jiraan barnaamijyo ku siin kara kabo bilaash ah?
Waa wax fiican inaad halkaan joogto. Marka, waxaan si naxariis leh u qaadan doonnaa hannaanka ogaanshaha waxa ay qaadanayso si looga faa'iideysto kabahaan bilaashka ah 2021.
Noocee Kabaha Keena Sneakers Bilaash ah?
Waan ogahay inay tani u ekaan karto mid aad u wanaagsan inay run noqoto laakiin si loo caddeeyo aawadeed; waxaad ku heli kartaa kabahaan bilaashka ah adigoo fulinaya waxqabadyada qaarkood. Wax yar ka walwalo sababtoo ah xitaa qadaadi maysid ilaa ay kabaha kuu soo gaaraan.
Waa kuwan shirkadaha soo socda ee bixiya kabaha bilaashka ah haddii aad oggolaato inaad tijaabiso-socodsiiso badeecadooda. Halkaan tag!
Liiska Barnaamijyada Kabaha Bilaashka ah ee ugu Fiican
Si aad u noqoto tijaabiye badeecada Adidas, waxaad ka dalban kartaa degelkooda. Waxay qaadataa dhawr daqiiqo oo keliya in la dhammaystiro. Haddii aad u qalanto, shirkadu waxay kuugu soo dirtaa casuumaad emayl ahaan.
Marka badeecadu timaaddo, waxaad u baahan doontaa inaad u isticmaasho wakhti cayiman oo socon kara toddobaadyo ama ku dhawaad. Caadi ahaan, muddada imtixaanku waxay socotaa 2-4 toddobaad.
Marka uu dhamaado mudada imtixaanka, waxaad buuxin doontaa foomka su'aalaha oo dib ayaad u soo diri doontaa alaabta. Si aad Adidas uga hesho kabo kabo bilaash ah, waxaad riixi kartaa xiriirka hoose.
Waxaa jira tijaabooyin taxane ah oo sumadda Brooks ay soo saartay alaabadooda kahor inta aysan suuqa u soo bandhigin.
Sababtoo ah badeecada summaddan waxaa inta badan adeegsada ciyaartooyda, waxay weydiiyaan jawaab -celin ku saabsan sida kabahaas bilaashka ah ay uga caawiyeen garoonka dhexdiisa.
Sida Adidas oo kale, Brooks waxay sidoo kale daryeeshaa sumadda shixnaddaada marka ay tahay in la soo celiyo.
Si aad Puma uga hesho kabahaaga bilaashka ah, si fudud u aad Google Play Store ama Apple Store si aad u soo dejiso App Pumatrac.
Halkaas, waxaad ku buuxin doontaa foom si aad u hesho kabo isboorti si aad u tijaabiso saddex toddobaad haddii ay ku doortaan.
Waxa xiisaha lihi, adiga ayaa si otomaatig ah u leh kabaha marka imtixaanku dhammaado oo ra'yigaaga lagu soo gudbiyo fiidiyowyo iyo sawirro.
#4 Dheelitirka Cusub
Si aad u noqotid a tijaabada sheyga ee Balance Cusub, waxay kaa rabaan inaad adigu sameysato astaan.
Intaas ka dib, kabaha ayaa laguu keeni doonaa. Way fiicantahay inaad soo celiso badeecada marka muddadu dhammaato
Barnaamijkan kabaha bilaashka ah kuma xadido bixinta dadka waaweyn kaliya. Xataa carruurta iyo dhallinyarada waa la soo dhaweynayaa.
Kaliya hubso inaad si dhakhso leh ula socodsiiso ra'yigaaga marka loo baahdo. Sidoo kale, waxaa laga yaabaa inaadan soo celin badeecadaha xaaladaha badankood oo haddii aad tahay qof gaar ah, Nike ayaa kuu soo diri doonta alaabooyin badan si ay u tijaabiso.
Tijaabiyaha badeecadda ee Columbia, waxaad helaysaa kabo ordaya oo bilaash ah ama kabaha socodka oo ay weheliyaan sumadda soo noqoshada.
Muddada imtixaanka oo dhan, waxaad haysaa hawlo badan oo aad dhammaystirto oo marka aad dhammayso; waxaad soo celineysaa kabaha bilaashka ah.
33 Alaabta ugu fiican ee lagu rogo lacag culus
Iyada oo aan loo eegin hawsha bannaanka ee aad gasho, barnaamijkan kabaha bilaashka ah wuxuu kaaga baahan yahay inaad qayb ka noqoto tijaabinta badeecadooda.
Hoos waxaa ku qoran shuruudaha ay tahay inaad buuxiso
Waa inaad tahay ugu yaraan 18 sanado jir
Noqo mid ku nool Qaaradda Ameerika ama Alaska
U hamuun qabo inaad dhammaystirto tirada saacadaha ama masaafada aad bixisay
Xiro kabo gaar ah
Hadda, barnaamijkan kabaha bilaashka ah wuxuu u shaqeeyaa si ka duwan sidii hore oo ah muddada imtixaanku waxay socotaa inta u dhaxaysa 3-6 toddobaad iyo dhammaadka muddada imtixaanka, waxaad alaabta ku soo celinaysaa qiimahaaga.
Wali ha guuxin sababtoo ah waxaad helaysaa alaab Reebok oo lacag la'aan ah 'mahadsanid'. Tani miyaanay qabow ahayn? Wax wanaagsani ma sahlana, huh!
Marka laga reebo tijaabinta badeecada, waxaa jira dhowr siyaabood oo kale oo aad ku heli karto kabo lacag la'aan ah. Codso barnaamijyo tijaabo oo dheeraad ah oo waxaad mooddaa in ilbidhiqsi kala go 'ah, waxaad yeelan doontaa kabo lacag la'aan ah.
33 Goobaha Kabaha Lagu Iibiyo Lacag Caddaan ah
13 Siyaabood Oo Lagu Helo Kabo Bilaash Ah Sida Adidas, Puma & Nike
Sida Loogu iibiyo Alaabta Guryaha Craigslist 2021 | Tusaha Khubarada
Qalab kasta oo duug ah oo aad haysato gaar ahaan kombiyuutarrada, waa inaad raadisaa hab aad uga takhalusto…
Bir qaali ah, oo u dhalaalaysa sida dab habeenkii holcaya oo kale, una dhalaalaysa sida iftiinka qoraxda ee hirarka biyaha, ayaa la helay...
Waa Maxay Caawiyayaashu? Sidee ayay u shaqaysaa 2022
Guri ama hanti iibsade ahaan, waxaa laga yaabaa inaad la kulantay ereyga 'Caawinta Iibiyaasha' mid online ah ama…
Xusuusnow markii ay ahayd inaad ku wareejiso lacag aad u badan mashruuc, oo aad ogaatay sida…